Amaxhoba ngokuziphendukela kwemvelo kwiintsapho zonqulo zihlala zibandakanya ibango lokuba akukho bubungqina obunzima bokuziphendukela kwemvelo. Abantu abaninzi banqunyulwa ngamabango anjalo, inxalenye yokuba nangona ibango lingenziwa ngendlela ephawulekayo kwaye ngokukhululeka, ukuxhatshaza kubaluleke kakhulu ukuchitha ixesha, ukufundiswa kunye nokuncinci kakhulu. Kodwa inyaniso kukuba kukho ubungqina obuninzi bokuziphendukela kwemvelo.
Ukwahlukana phakathi kwezinto ezifanisayo kunye neengqungquthela kunika indlela enqabileyo yokuthi uThixo akakho (kunye neengcali ezivuma ukuziphendukela kwemvelo) ukuchaza ubungqina bokuziphendukela kwemvelo ezivela kwiindlela ezimbini.
Izakhi zoLungiso lweeAnalogous / Convergent
Ezinye iziganeko zezinto eziphilayo zifana (ezibizwa ngokuba "ziguquguqukileyo"), oku kuthetha ukuba bakhonza umsebenzi ofanayo kwiintlobo ezahlukeneyo kodwa bavela ngokuzimela kunokuba bavela kwizinto ezifanayo ze-embrological or from structures similar to ancestor. Umzekelo wesakhiwo esifanayo siya kuba ngamaphiko kwiibhotela, iilwane kunye neentaka.
Omnye umzekelo obalulekileyo uza kuba kukuphuhlisa iliso lekhamera kwii-mollusks kunye nama-vertebrates. Lo mzekelo wezakhiwo ezifanelanayo uncedo ngokukhethekileyo kuba enye yezona zibango eziqhelekileyo ezenziwe ngabadali bezenkolo kukuba into eyinkimbinkimbi njengokuba iliso alinakukwazi ukuguqukela ngokwemvelo - bafuna ukuba inkcazo ebonakalayo ingumyili wendalo (ohlala oothixo wabo, nakuba bengavumi ukuvuma oku ngokuthe ngqo).
Inyaniso yokuba amehlo kwiintlobo ezahlukeneyo zakhiwo azibonakali nje ukuba iliso lingahle liguquke ngokwemvelo, kodwa ukuba, ngokuqinisekileyo, liguquke ngokuphindaphindiweyo, ngokuzimeleyo, kunye neendlela ezahlukeneyo. Kwakunjalo nakwezinye izakhiwo ezingafaniyo, kwaye oku kungenxa yokuba imisebenzi ethile (njengokuba uyakwazi ukuyibona) inokubaluleka kakhulu ukuba ayinakugweba iya kuguquka ekugqibeleni.
Akukho zidalwa zendalo, nokuba ngaba oothixo okanye akunjalo, ziyimfuneko ukuchaza okanye ukuqonda indlela amehlo aguquke ngayo amaxesha amaninzi.
Ngakolunye uhlangothi, izibalulo eziza kubelwa ziintlobo ezinxulumene ngenxa yokuba zizuzwe njengelifa ngandlela-thile. Ngokomzekelo, amathambo ephambi kweengcongolo zangaphambili ze-whale ayenamathele emathanjeni ngengalo yomntu kwaye bobabini banamathemba emathanjeni ngengalo ye-chimpanzee. Amathambo kuzo zonke izixhobo zomzimba ezahlukileyo kwizilwanyana ezahlukeneyo zixhomekeke kumathambo afanayo, kodwa ubukhulu bawo buhlukile kwaye bakhonza imisebenzi eyahlukileyo kwimfuyo apho ifunyenwe khona.
Izakhiwo zezindlu zinikeza ubungqina bokuziphendukela kwemvelo kuba zivumela i-biologists ukuba zilandele indlela yokuziphendukela kwemvelo yeentlobo ezahlukileyo, zidibanisa nomthi omkhulu wokuziphendukela kwemvelo ezidibanisa bonke ubomi kubukho okhokho. Ezi zakhiwo zibubungqina obuqinileyo malunga nokudalwa kwemvelo kunye neNkcazelo eyiNtloko: ukuba kukho ubuThixo odale zonke iintlobo ezahlukileyo, kutheni usebenzisa izixhobo ezifanayo ngokubanzi nakwezinye izidalwa kwimisebenzi eyahlukileyo? Kutheni ungazisebenzisi izitsha ezintsha ngokupheleleyo ezijoliswe ngokukhethekileyo kwiinjongo ezithile kunye ezahlukeneyo?
Ngokuqinisekileyo "isandla esiphelele ngakumbi" kunye "nesibindi esipheleleyo" singadalwa ukuba kusekelwe kwiindawo ezenzelwe injongo yazo. Esikhundleni saloo nto sinayo imimandla yomzimba engafezekanga-kwaye ayifezekanga ngenxa yokuba zonke zivela emathanjeni ayenokuqala ngenxa yezizathu ezithile. Amathambo aguqulelwe, ngaphezu kwexesha elide, ngeenjongo ezintsha ezifunekayo nje ukuba ziphumelele. Ukuziphendukela kwemvelo kufuneke ukuba umntu abe ngcono kunabakhuphiswano, kungekhona ukuba yinto efanelekileyo kakhulu into enokwenzeka. Yingakho izinto ezingaphelelekanga kunye nezakhiwo ziqhelekileyo kwihlabathi lemvelo.
Njengoko kunjalo, ihlabathi lonke lezinto eziphilayo linga kuthiwa liqulunqwe kwizakhiwo ze-homologous: bonke ubomi busekelwe kwiindidi ezifanayo ze-nucleotides kunye ne-amino acids efanayo.
Ngoba? Umqambi onokugqibeleleyo kwaye onengqiqo unokudala lula ubomi kwiintlobo ze-amino acid kunye ne- DNA , zonke ezifanelekileyo ngokufanelekileyo. Ubukho bezinto ezifanayo zemikhemikhali kuzo zonke zobomi bubungqina bokuba bonke ubomi bunxulumene kwaye buphuhliswa kwikhokho oqhelekileyo. Ubu bungqina bobunzululwazi abubuxoki: akukho oothixo okanye abanye abaqulunqi banesandla ekuphuhlisweni kobomi ngokubanzi okanye ubomi buntu ngokukodwa. Siyinto esiyiyo ngenxa yelifa lethu lokuziphendukela kwemvelo, kungekhona ngenxa yeminqweno okanye intando yanoma yimuphi unkulunkulu.
Isinqumo seNkundla ePhakamileyo se-1957: Roth v. United States
Ubunzima: Iimpawu ezichaseneyo zeZowdiac
I-Jaikara ichazwe: I-Cheers eyaziwayo e-Sikhism
Iifrentshi zesiFrentshi ngeRendre
Okubi kakhulu kuqala kumlando weNBA